Casinos casinos na-ekwupụta ọrụ na ikike zuru oke ozugbo - pisklak.net
Casinos casinos na-ekwupụta ọrụ na ikike zuru oke ozugbo
Caslọ Casinos nwere obi ụtọ ịkpọsa na ọ natara nkwado site na Nevada Gaming Control Board iji mee ka ebe obibi egwuregwu ya dị na 100 pasent na ngwongwo ya niile, gụnyere Red Rock, Green Valley Ranch, Palace Station, Boulder Station, Sunset Station na Santa Fe Station, irè ozugbo.
Kemgbe mbido Eprel, iji nyere ndị otu ya aka, ndị ezinụlọ ha, ndị obodo na ụlọ ọrụ egwuregwu, Station Casinos, n’ego nke aka ya, mepere ụlọ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi na mpaghara niile. N’ihi ya, Companylọ ọrụ ahụ enweela ike ịgba ọgwụ mgbochi nke ọtụtụ n’ime ndị otu ya.
Companylọ ọrụ ahụ ga-aga n’ihu na ịgba ọgwụ mgbochi nke ime ya na mgbasa ozi ịgba ọgwụ mgbochi na Mee na oge ọkọchị ma ga-aga n’ihu na-akụzi, na-akpali ma na-akwụghachi ndị otu ya ụgwọ. Tụkwasị na nke ahụ, na mgbalị ya iji nyere obodo ka ukwuu aka n’ịmewanye udo na nnweta maka ọgwụ mgbochi COVID-19, Companylọ ọrụ ahụ ga-eme ọgwụ mgbochi na ihe onwunwe ya, ma gaa n’ihu na mmekorita ya na Clark County site n’inye ụlọ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi na Texas Station .
Companylọ ọrụ ahụ ga-ekele Gọvanọ Steve Sisolak, Nevada Gaming Control Board, Clark County Commissioners na ndị ọchịchị obodo niile maka nduzi na nduzi ha na-eguzosi ike, ma na-anabata ndị ọbịa ya na-alọta.
Echiche Post: 4,494